Abavelisi beBhodi eyiSmart, abavelisi beMpawu zeDijithali- iIscreen
UMGANGATHO • UYILO • UPHANDO
Ngesiseko solawulo olungqongqo lwezixhobo kunye neemveliso ezigqityiweyo, sinika uyilo lwenoveli kunye nokwenza izinto ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha, kunye nokuhlaziya iinkqubo kunye nesoftware ngexesha
Iscreen Itekhnoloji Co., Ltd .. lishishini eliphambili kwezobuchwephesha elikhethekileyo kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwemfundiso yemultimedia kunye nezixhobo zokubonisa eziphezulu. Inombutho wobugcisa ozimeleyo we-R & D, imveliso egqibeleleyo kunye neqela lokuthengisa emva kokuthengisa, isikhululo senethiwekhi senkonzo kuwo onke amaphondo nakwizixeko zeli lizwe. Ezona mveliso ziphambili zezi: iiprojektha, i-LED, umboniso weLCD, iiKioski zedijithali kunye neBhodi yeBhodi kunye nePaneli yeTV, njl njl.
Iimveliso zethu Iprojektha Ikhamera yoXwebhu Isakhelo esisebenzisanayo
UKULUNGISELELA OKULUNGILEYO • IINKONZO ZEYURE eziyi-7 * 24 • INKONZO YOKUNIKEZELWA KWEentsuku ezili-15.
Sibonelela ngeenkonzo ezingama-7 * ezingama-24 zokutshatisa ixesha lakho lokusebenza.
Senza i-OEM kunye ne-ODM kwiintsuku nje ezili-15.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zentengiso yakho kunye nabathengi.
Iphaneli yeFlat esebenzayo, Ixabiso lePaneli ePhambeneyo, Iphaneli efanelekileyo yeFlat efanelekileyo, Iprojekti yeBhodi eSmart, Ixabiso elibonisanayo lePaneli yokuBonisa, Ukuboniswa kwePaneli yokuNxibelelana kwePaneli,